Al-Shabaab oo shaaca ka qaaday in Madaxweyne Xasan Sheekh uu Dirqi kaga baxsaday ayna gubeen gaadiid galbinaayey. | Salaan Media
Al-Shabaab oo shaaca ka qaaday in Madaxweyne Xasan Sheekh uu Dirqi kaga baxsaday ayna gubeen gaadiid galbinaayey.
Xarakada Al-Shabaab ayaa barahooda Internetka waxaa lasoo dhigay war sheegaya in Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kolonyo lasocday ay jidka u galeen ayna gubeen gawaadhi dagaal oo Madaxweynaha ilaalinaayey.
Weerarka Al-Shabaab sheegeen in ay qaadeen ayaa ka dhacay halka loo yaqaan Buufow waxaana lala eegtay gawaadhi dagaal oo galbineysay Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud xili uu kusii jeeday Magaalada Marka ee Xarunta Gobolka Sh/Hoose.
Shabaab waxa ay sheegeen in Madaxweynaha uu weerarka ka badbaaday balse ay gubeen gaadiid Dagaal oo lasocday , waxa ayna sidoo kale xuseen in ay jiraan khasaarooyin dhimasho iyo dhaawac leh oo la gaadhsiiyay Ciidamadii lasocday Madaxweynaha.
Dowlada dhankooda wax war ah kama soo saarin Weerarkan Shabaab sheegeen in ay saakay ku qaadeen kolonyadii uu la socday Madaxweynaha Soomaaliya oo xiligan kusugan Magaalada Marka ee Xarunta Gobolka Sh/Hoose.
Waanu idinla socodsiin wixii war ah ee kasoo kordha weerarkaa Insha Allah.